Faah faahin: Ismiidaaminta ka dhacday Muqdisho + SAWIRRO | Dhacdo
Home Wararka Maanta Faah faahin: Ismiidaaminta ka dhacday Muqdisho + SAWIRRO
Faah faahin: Ismiidaaminta ka dhacday Muqdisho + SAWIRRO
Faah faahino ayaa ka soo baxaya gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo galabta lagu dhuftay gaadiid ay la socdeen Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Laba gaari oo Ciidanka AMISOM ay leeyihiin ayaa lagu weeraray meel aan ka fogayn Isgoyska Banaadir ee Degmada Hodan.
Ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay qaraxaasi, halka saddex kalena ay ku dhaawacantay, oo midkood uu yahay askari ka tirsan Xoogaga AMISOM. Dadka rayidka ee ku waxyeeloobay qaraxaasi ayaa xilligaa marayay waddada.
Mahad Xuseen oo ka mid ahaa dadkii qaraxaasi ka badbaaday ayaa yiri “Waxaan arkay laba baabuur oo AMISOM leedahay iyo baabuur kale oo lagu dhuftay. Qaraxa ka hor jewiga goobta aad buu u deganaa, daqiiqad ka dib markii uu qaraxu dhacay xaaladda waxay isku bedeshay in lees dhex-yaaco.”
Mahad Xuseen ayaa yiri “Indhahaygu waxay qabteen baabuurta AMISOM oo mid ka mida uu burbur xoogan soo gaaray iyo saddex askari oo laga soo dejinayo. Mid ka mid ah askarta AMISOM madaxa ayay wax ka soo gaareen.”
Waxa uu intaa ku daray “Ciidamo kale oo AMISOM ah oo ka yimid dhinaca Xerada Xalane ayaa baabuurkaasi ka jiiday goobta, xeradooda ayayna la aadeen.”
Ururka Al Shabaab oo ka biyo diidan jooggitaanka AMISOM ee dalka ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxan, iyaga oo qoraal ku sheegtay inay bartilmaameedsadeen gaari AMISOM leedahay, oo Saraakiil American ahi ay la socdeen.
“Mujaahidiinta ayaa camaliyad istish-haadi ah la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen Saraakiil Caddaan American ah, waxaa si gaar ah loo beegsaday gaarigii ay saarnaayeen Saraakiisha Mareykanka ah, waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh.” Ayaa lagu yiri warka Shabaabka ka soo baxay.
Previous articleHormuud Telecom oo la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan
Next articleGuddiga Doorashooyinka oo amray in 16-ka bishan la bilaabo Doorashada Golaha Shacabka